जनसहभागिताको शहर बनाउने अभियान्ता पदम इस्वो
पदम इस्वो लिम्बु, उप मेयर उम्मेदवार नेकपा एमाले धरान
धरान । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नेकपा एमालेले धरान उमहानगर पालिका वडा नं १९ निवासी पदम इस्वो (लिम्वू)लाई उपमेयरको उम्मेद्धवार वनाएको छ ।
पद र शक्ति भन्दा पनि पार्टीलाई योगदान गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेका इस्वोलाई धरानमा इमान्दार र झुझारु युवा नेताको रुपमा चिन्छिन् । २०५६ सालदेखि निरन्तर ११ वर्ष सम्म धरान नगर कमिटीको सदस्यमा रहेर काम गरेका उनी २०६८ सालदेखि जिल्ला कमिटीमा रहँदै हाल नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला सदस्य एवम् क्षेत्रीय सह–संयोजकको जिम्मेवारीमा छन् । ४० सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा अहोरात्र लागेका इस्वोले वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट उपमेयरको लागि उम्मेद्धवार पाएसँगै उनको चर्चा अझै चुलिएको छ ।
पार्टीमा योगदान मात्र होइन धरानलाई आधुनिक शहर जनसहभागिताको शहर बनाउन उनको पनि योगदान रहेको जग जाहेरै छ । तत्कालिन धरान नगरपालिकाका मेयर मनोज मेयाङ्वोको कार्यकालसँगै २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उनी जननिर्वाचित १९ नं. वडाको वडाध्यक्ष समेत भए । जनसहभागिताको शहर बनाउन मेयरलाई सहयोग गर्ने मुख्य मान्छे तीनै पदम थिए । नगरको विकासमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनु पर्छ भनेर धरानले त्यस वेला अभियान चलाएको थियो । त्यस अभियानमा पदम लिम्बु पनि सामेल थिए । मेयर मेन्याङ्वो तथा लिम्बु लगायतको जोडवलमा धरानमा स्थानीयको सहभागितामा चिल्ला सडकहरु बनेका थिए । धरानलाई आधुनिक शहर वनाउने तत्कालिन धरान नगरका पुर्व वडाध्यक्ष समेत हुन् । उनी वडाध्यक्ष भएको कार्यकाल अवधिमा नै वडा नम्बर १९ का वासिन्दाले चिल्ला सडक आफ्नै घर अगाडि पाए । जुन वडा अहिले नमुना वडाको रुपमा रहेको छ ।
युवा संघको केन्द्रिय नेतृत्व सम्म
तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउपालिका (साविक चुहाँनडाँडा गाविस) मा २०४० सालदेखि राजनीतिक जीवन यात्रा शुरु गरेका हुन् । तेह्रथुमकै सारदा माविमा अध्ययन गर्ने क्रममा अनेरास्ववियूबाटै इस्वोको राजनीतिक जीवन यात्रा शुरु भएको हो । विद्यार्थी कालदेखि नै विद्यार्थीहरुको हक हित र अधिकारको आवाजलाई वुलन्द गर्दै अघि वढेका उनी विसं २०४२ सालमा महेन्द्र वहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्ययन गर्ने सिलसिलमा धरान आएका थिए । क्याम्पसमा पनि अध्ययनका साथै अनेरास्ववियू सह प्रारम्भिक कमिटीमा आवद्ध रहेर नै राजनीतिक यात्रालाई थप अघि वढाए ।
तेह्रथुमबाट धरान आएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई पनि संगठित गरेका थिए । विसं २०४६ सालमा अनेरास्ववियू तेह्रथुम धरान सम्पर्क मञ्चको उपाध्यक्ष भएर विद्यार्थीकै हक हितमा काम गरेका थिए । राजनीतिमा नेकपा एमालेको प्ररायु संघ (राष्ट्रिय युवा संघ) सुनसरीको २ कार्यकाल अध्यक्ष भएर नेतृत्व गर्ने क्रममा जिल्ला संगठनलाई नेपालकै उत्कृष्ट जिल्ला वनाउन सफल भए । तदाअनुरुप सर्वोत्कृष्ट जिल्ला २०६१ मा सुनसरीको संगठनले ११ हजार नगद सहित सम्मानित भएको थियो । युवा संघ नेपालको केन्द्रिय सचिवालय सदस्य एवम् कोशी अन्चल इन्चार्ज, युथ फोर्स नेपालको पूर्वाञ्चल सह–संयोजक भएर राजनीति क्षेत्रको उचाईमा युवाहरु माझ आफुलाई थप स्थापित गराउँदै लगे । त्यसैगरि युवा किसान महासंघको केन्द्रिय उपाध्यक्ष, किसान महासंघको राष्ट्रिय सदस्य र सुनसरी इन्चार्ज रहेर युवा किसानहरुको नेतृत्व गरेका छन् । उनी यति बेला पनि युवाहरु माझ लोकप्रिय छन् । उनी २०४६ सालको जन आन्दोलनमा समेत समेत सक्रिय नेतृत्व गरेका थिए । त्यो भुमिकाकै कारण नै इस्वोलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको थियो ।
वडा कमिटी सचिव हुँदै वडाध्यक्ष सम्म
धरान १९ मा २०५१ सालदेखि नेकपा एमाले वडा कमिटीको सचिव भएर पार्टीको काममा सक्रिय भए । उनले २ कार्यकाल वडा सचिवको भुमिका निर्वाह गरे र पार्टीलाई थप संगठित मजवुद वनाउँदै २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा पनि विजयी भए । वडालाई सम्मुन्नत वडा वनाएर जनताको थप मन जित्न सफल भए । उनी तत्कालिन समयमा धरानको कान्छो वडाध्यक्षको रुपमा समेत परिचित थिए । आफ्नो कार्यकालयमा धरान नगरभित्र पहिलो पटक वडा समितीको आफ्नै वडा कार्यालय स्थापना गरी सन्चालन गर्ने वडाध्यक्ष समेत हुन् । त्यो वेला वडा कार्यालय धरानमा कतै पनि सन्चालनमा थिएनन् ।
धरानको खेलकुद विकासमा अग्रणी भुमिका
पदम इस्वो २०५५ सालमा धरान फु्टवल क्लवको संस्थापक सदस्य समेत हुन् । धरानको फुटवल खेललाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा परिचति गराउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका थिए । धरान फुटवल क्लवको विधान तथा स्वागत गीतका रचनाकार समेत हुन् । विसं २०६३ सालमा खेलकुद विकास समिती सुनसरीको अध्यक्ष वन्न सफल भए । उनकै कार्यकालमा कोशी अञ्चल खेलकुद विकास समितीको नाममा रहेको अचल सम्पती धरान रंगशालाको जग्गा तथा धरान १० को कवर्ड हलको जग्गालाई समेत जिल्ला खेलकुद विकास समितीको नाममा ल्याएका हुन् । उनी भन्छन, “धरान खेलकुदको शहर तर यहाँ कुनै खेलकुदको भौतिक संरचनाहरु नहँुदा लज्जास्पद स्थित थियो, मेरो कार्यकालमा खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि भौतिक संरचना वनाएपछि अहिले थप सजिलो भएको छ ।” धरानमा रहेका खेलकुदका संरचना बनाउने काममा उनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालयमा सुचना केन्द्रको स्थापना गरेर खेलाडीहरुलाई सुचनाद्धारा जोड्ने काम समेत गरेका थिए ।
शिक्षकदेखि कानुनी व्यवसाय सम्म
इस्बो बहुप्रतिभाका धनी व्यक्ति हुन । हरेक क्षेत्रमा उनको योगदान तथा अनुभव रहेको छ । वि सं २०४८ सालदेखि ६ वर्ष सम्म किराँतेश्वर निमाविमा अध्यापन गराए । त्यसैगरि २०५१ सालदेखि ३ वर्ष सम्म महेन्द्र वहुमुखी क्याम्पस धरानमा समेत उनले अध्यापन गराए । अर्थात सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, खेलकुद लगायतको क्षेत्रमा उनको लामो अनुभव छ । इस्वो कानुनी व्यवसाय समेत हुन । धरान कानुन व्यवसायी क्लवको संस्थापक उपाध्यक्ष समेत हुन् । २३ वर्षदेखि निरन्तर कानुनी पैरवी गर्दै आइरहेका इस्वो नेपाल बार एसोसिएन केन्द्रिय परिषदको सदस्य समेत छन् । कानुन व्यवसायको भुमिका रहँदा गरिव निमुखा तथा छुवाछत विरुद्धको क्षेत्रमा निशुल्क सेवा प्रदान गरेका छन् ।
समृद्ध शहर वनाउने प्रतिवद्ध
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपमेयरका उम्मेद्धवार वन्न सफल वनेका इस्वोले नेकपा एमालेले राष्ट्रियताको सवालमा लिएको चटानी अडान नै आमजनताले सूर्य ध्वजावाहक चिन्हमा मतदान गरेर विजयी गराउने वताए । उनले भने, “धरानवासीको लागि म २४ सै घण्टा सक्रिय हुनेछ, धरानको विकास, सुखी धरान र समृद्ध धरान वनाउनलाई धराने जनताको चाहना अनुसार नै जितेपछि इमान्दार भई काम गर्ने छु ।” पहिलो स्थानीय तहमा एमालेका जनप्रतिनिधीले गरेको कामले पनि धरानमा एमालेले जनताको मन जित्न सफल भएको छ । उनीहरुले गरेको विकासले आज धरानको मुहार फेरिएको छ । एमाले पार्टीले राष्ट्रिय सरकारमा रहँदा गरेको सुकुम्वासीको समस्याका सन्दर्भमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई थप कार्यान्वयन गर्न
आफु प्रतिबद्ध रहेको उनी वताउँछन् ।
धरानको दिगो विकास युवाको आमुल परिर्वतन खानेपानी समस्याको समाधान, धरानलाई दुव्र्यसनमुतm वनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य पर्यटनको क्षेत्रका विशेष योजना वनाउने र धरानलाई समृद्ध शहर वनाउनको लागि कटिवद्ध रहने छु । इस्वो कानुन व्यवसायी(वकिल ) समेत भएकाले धरानको न्यायिक समितीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा निश्पक्ष न्यायको समेत धराने जनताले आशा भरोसा गरेका छन् । साथै न्यायिक समितिबाट न्याय निरुपण गर्दा निश्पक्ष न्याय सम्पादनले धराने जनताहरु झन्झटिलो मुद्धा मामिलामा समेत सहज हुने विश्वास लिएका छन् ।
मधु निरौलाको सान्दार ...
झापाः झापाको मेचीनगर नगरपालिका १२ नं. वडाको अन्तिम मत प ...
धरान २० को विवाद सकि ...
धरान । तीन दिन अगाडि मतगणना सम्पन्न भएपनि विवादका कारण ...
अनाथ बालबालिकालाई यु ...
धरान । शैक्षिक गतिविधिसंगै सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर् ...
धरानमा मत परिणाम धमा ...
धरान । धरानमा विगतको मतपरिणाम भन्दा फरक परिणाम आउने संक ...